Firaisana ara-nofo ho an'ny vehivavy - inona no tokony ho fantatrao sy ho azonao
Amin'izao fotoana izao dia mihamahazo vahana kokoa ny fialam-boly malaza sy ny karazana firaisana ara-nofo. Saingy, misy ny "lafiny roa" amin'ilay farantsa. Inona no zazavavy manao firaisana amin'ny anal??
Famadihana virtoaly - mametraka sa miady?
Firaisana ara-nofo, fitiavana virtoaly, na dia efa nanambady aza tamin'ny resaka iray, ankehitriny ianao dia tsy hahagaga ny olona amin'izany. Fa amin'ny fomba ahoana no misy ny fitiavana virtoaly toy izany eo amin'ny tena fiainana?
Ahoana ny fomba hampitsaharana ny fitiavana sy hanadinoana lehilahy
Tsy raharaha mora ny fisarahana, fa vao maika aza sarotra kokoa ny mamoaka ilay "malala" sy ny loha. Raha milaza ianao fa nanadino azy aho, fa manaova fampitoviana aminy sy olom-pantatra vaovao, tezera aminy. Ka tsy hadinonao ilay lehilahy ...
Ankizivavy maro no mino fa tsy tantaram-pitiavana mihitsy ny lehilahy. Andao hiezaka ny hijery ny tantaram-pitiavana amin'ny fomba fijerin'ny lehilahy.
Ahoana ny fomba hanolorana ny tanana sy ny fo ho an'ny malalanao?
Raha te-hanao tolo-kevitra mamirapiratra, tsy hay hadinoina ary tsy mahazatra ianao, aza hadino ny mamaky ity lahatsoratra ity!
Zava-misy mahaliana momba ny lehilahy
Inona no mahazatra ny lehilahy? Inona avy ireo fahazarana sy fitondran-tena? Vaovao vitsivitsy no hahagaga anao.
Toastmaster ho an'ny fampakaram-bady - ahoana no hisafidianana?
Inona avy ireo toetra tokony hananan'ny mpanambady? Inona no tokony hoeritreretiko? ahoana ny fomba hisafidianana toastmaster? Andao hojerentsika!
Ahoana ny fomba hanovana ny hariva tantaram-pitiavana ho sakafo maraina eo am-pandriana
Amin'izao fotoana izao, ny firaisana dia misy sahala amin'ny kafe, fa ny fomba fanitsiana azy tsara. Ahoana no hampifaliana ny ankizivavy? Mba hahatongavana amin'izany andriana mitaingina soavaly fotsy izany izay tadiavin'izy ireo tsy "fialamboly" fotsiny fa hanorina fifandraisana.
pejy 1 pejy 2 ... pejy 217 Next Page
66 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 1,593.